Free iyo Open Source Apple Lisa software-ka 2018 | Waxaan ka socdaa mac
Free iyo Open Source barnaamijka Apple Lisa sanadka 2018
Sawirka: Taariikhda Mac
Khuraafaadka Nidaamka ay ku shaqeyso Apple ee Lisa ayaa soo noolaan doonta sanadka soo socda. Intaas waxaa sii dheer, waxay ka dhigi doontaa gabi ahaanba bilaash iyo Open Source. Tallaabadani waa ku mahadsan tahay Matxafka Taariikhda Kombuyuutarka. Markaa waan ku raaxeysan karnaa, markale, maxaa noqon kara nidaam kumbuyuutar shaqsiyeed ee ugu horreeya ee adeegsada daaqad ku saleysan isticmaale.
Waa inaan dib ugu noqonaa 1983. The Apple Lisa waxaa laga bilaabay suuqa intii lagu jiray bishii Janaayo ee isla sanadkaas. Steve Jobs qudhiisa ayaa ka shaqeynayay mashruuca. Intaa waxaa sii dheer, magaca mashruucan wuxuu ka yimid gabadha koowaad ee Steve Jobs - xogtan waxaa la ogaa sannado ka dib. Waqtigaas ka dib, nooca rasmiga ah ee 'Lisa' wuxuu ahaa soo gaabinta "Dhismaha Barnaamijka Isku-dhafan ee Deegaanka."
Sidoo kale, Apple Lisa waxay ahayd guul laga gaadhay xisaabinta. Sababta Hagaag, waxaas oo dhan, waxa weeye isku xirnaanta adeegsadaha ee ku saleysan daaqadaha iyo in wax walba lagu maareeyay isticmaalka jiirka - ama jiirka—. In kasta oo, sidaan kuu sheegnay, la sheegay in Apple Lisa ay ahayd tii ugu horreysay ee sameysa is-dhexgal noocan ah oo laga heli karo adeegsadaha, haddana sidoo kale waa run in 10 sano ka hor, Xerox ay soo saartay noocan ah GUI Xerox Alto (1973) iyo Xiddigta Xerox 8010 (1981). Waa badan tahay, fikradda nidaamka qalliinka ee Apple Lisa ayaa iyaga ku saleysneyd.
Hadday dhammaan war wanaagsan u ahayd suuqa, maxaa dhacay? Waxa ugu horreeya ayaa ah in Apple Lisa uu ahaa kombiyuutar aad u awood badan waqtigaas: processor-ka wanaagsan, xusuusta RAM ka sarreysa celceliska (1 Mb sanadkaas ayaa ku filnaa); hawlgalka jiirka kombiyuutarka iyo interface si fudud loo isticmaali karo oo xitaa ilmuhu ka dhigi karo inuu shaqeeyo Si kastaba ha noqotee, wadarta iibku kama badnayn 10.000 unug. Y Inta badan eedda waxay ku timid qiimaheeda: $ 10.000 (ku dhowaad 8.500 euro hadda laakiin 1983).
Iyo for xus 35 sano oo ka mid ah taariikhdan xisaabinta bisha Janaayo 2018, "Matxafka Taariikhda Kumbuyuutarka" wuxuu ka dhigi doonaa isha furan ee buuxda nidaamka Apple Lisa ee ay ku heli karaan qof walba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Free iyo Open Source barnaamijka Apple Lisa sanadka 2018
Fiidiyow leh sanduuqa sanduuqa cusub ee iMac Pro